Ebale Mondial oo ka socda kooxda Salongo de l'Ozrt: mid ka mid ah kuwii ugu wanaagsanaa ee Zaire (Kongo) ay yeelatay waxayna ka tagtay sumcaddeeda iyo saameynteeda ilaa maanta
Posted By: KongoLisolowaa: Maarso 7, 2018 1: 52 No Comments
Ma aha guuto aan lahayn tusaale u ah Ebale Mondial, oo guurkeedii taariikhiga ahaa ee webiga! Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Maarso 7, 2018 4: 26 No Comments
Maxey u diidaan qaar ka mid ah kuwa muusikada ku jira muusikada, shineemo, tiyaatarka, siyaasad ... Rumeyso in macno loo yeesho waxay qabanayaan oo ay guuleystaan, waxaa lagama maarmaan ah in haween dhinacooda laga helo cadaan
Posted By: KongoLisolowaa: Febraayo 12, 2018 1: 49 No Comments
Si kastaba ha noqotee, waan guuleysan karnaa mar walbana waxaan ku guuleeysan karnaa boqorad madow. Si kastaba ha noqotee, Obama, Harry Roselmack, Washington Denzel, Jay-Z, Mandela, DKB ... Intaa waxaa dheer, filimaanta cad, ... Akhri wax dheeraad ah
Dadku ma ku noolaan karo kibis oo keliya, laakiin wuxuu ku nool yahay eray kasta oo Ilaah. Luukos 4: 4… (VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: Janaayo 31, 2017 12: 10 No Comments
Gabadhani waa wax aan caadi aheyn ka dib markay wax cunaan, kaligood oo ay haatan dadka weydiisanayaan inay wadaagaan ereyga Ilaah ... Taasi micnaheedu waa, inaan erayga wadaagno kaliya ... Akhri wax dheeraad ah
Waan ka xumahay! waa inaadan qoslin… .. Waa nin weyn… Lol!
Posted By: KongoLisolowaa: Juun 26, 2016 2: 58 No Comments
https://youtu.be/aAxbqG3aNgE Akhri wax dheeraad ah
Ciise Masiix: Dhakhtarka "Aryeh Shimron" wuxuu u xaqiijinayaa New York Times inuu caddeyn karo in xabaashii "Talbiot", bariga Qudus, ay runtii tahay Masiixa, iyo inuu lahaan lahaa farcan ... Fikradaada dhiibo fadlan
Dadka Afrikaanka ah ma ku dhaqmaan addoonsiga? Marka laga reebo waxa qof kastaa aaminsan yahay mowduucaan, maxay xaqiiqooyinka dhab ahaantii dhahayaan? Dadka Afrikaanka ah ee taariikhda Pharaonic, waxay ahaayeen kuwa xiiray?
Mudaaharaad udhaxeeya halgameyaasha: dhammaan madowga ayaa la dagaallamaya, laakiin waxaa jira labo qaybood dhexdooda ah "Fiiri muuqaalka masawirka si aad uga dhaadhiciso kala-go'aansiga u dhexeeya"
Lubos motl: Fiisigiska caanka ah wuxuu leeyahay “Naagta madowga ah waa Ilaah”
Feb21 05: 54